WINDOWS တွေအဘို့အ Kodak Camere ဝေမျှမယ် Button လေးက App ဆော့ဖ်ဝဲကို XP vista7 အနိုင်ရ 8 | | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဇူလိုင်လ 1, 2014 admin ရဲ့ လြှောကျလှာ, မောင်းသူ 0
ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုသာကိုက်ညီ Kodak ကင်မရာက.
operating System ကိုအသုံးပြုပုံများ:
WINDOWS 8, WINDOWS 7, Windows Vista, WINDOWS XP ကို
Download လုပ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ. (Password ကို : os-ကြီးများ)
အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, အီတလီ, ဂျာမန်, ဒတျချြ, ဆွီဒင်, ဖင်လန်, စပိန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား, တရုတ်, ပေါ်တူဂီ, တူရကီ, အရောင်တင်, ရုရှား
ဒီ Software ကိုအဆုံး-ဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်, အဆင့်မြင့်အိုင်တီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအိမ်တွင်အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးဖောက်သည်များအပါအဝင်.
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေအားလုံးဆက်စပ်ပစ္စည်း devices တွေကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ (ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ, ကင်မရာကိုအထိုင်, ပရင်တာအားအထိုင်, ဓာတ်ပုံပရင်တာ, ကတ်ကိုစာဖတ်သူကို, စသည်တို့ကို).
သင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကို အသုံးပြု. ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် logged ကြောင့် Verify.
ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ပါ, ထို့နောက် software ကို install သွင်းဖို့ on-screen ကိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ.
မှတ်စု: တစ်ဦးထောက်ခံ Kodak ကင်မရာကကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်သောအခါ App ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်အမျှဝေမည် Button လေး.
Xiaomi ကအသစ်စစ်ဆင်ရေး, Xiaomi က3s ကို /4ရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့လွှတ်ပေးရန်နိုင်ပါစေ
စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ OS ကို-STORE Software များ ဥပဒေရေးရာအနက် HD Graphics နည်းပညာ Nokia က Samsung က Intel က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Technology_Internet စီပီယူ processor ​​ကို 64-နည်းနည်းက Windows ပရိုဆက်ဆာ device ကိုမော်ဒယ် HTC က မိုဘိုင်းဖုန်း
စီပီယူ OS ကို-STORE 64-နည်းနည်းက Windows device ကိုမော်ဒယ် Qualcomm မှ processor ​​ကို နည်းပညာ Samsung ရဲ့ Galaxy HTC က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Intel က Technology_Internet Software များ Intel က Server ကို ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Samsung က ဥပဒေရေးရာအနက် စမတ်ဖုန်းများ မိုဘိုင်းဖုန်း Sony Ericsson က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု HD Graphics Nokia က ပရိုဆက်ဆာ